Fiendrika añanovana - Wikipedia
Ny fiendrika añanovana na fitodika mpamari-toe-javatra dia fiendrika na fitodika hita ao amin'ny fiteny malagasy araka ny fitsipiteny sy ny haiteny malagasy. Fiendrika fahatelo manaraka ny fiendrika mañano sy ny fiendrika anoina izy. Ny fitsipiteny malagasy tranainy sasany dia tsy mahalala ny fisian'io fiendrika io fa mampiditra izay tokony ho isany ao amin'ny fiendrika anoina.
1 Ny fiendrika añanovana ao amin'ny fiteny malagasy
1.1 Ny fiendrika añanovana araka ireo fitsipiteny tranainy
1.2 Ny fiendrika añanovana araka ny haiteny ankehitriny
1.2.1 Fiendrika añanovana araka ny haiteny ara-piofohana
1.2.2 Fitodika toe-javatra araka ny haiteny araka anjara asa
Ny fiendrika añanovana ao amin'ny fiteny malagasyHanova
Ny fiendrika añanovana araka ireo fitsipiteny tranainyHanova
Ny fitsipiteny tranainy sasany dia tsy miresaka ny amin'io fiendrika io. Ao amin'ireo fitsipiteny tranainy izay miresaka azy dia fiendrika mahaleo tena sady mifameno sy mifamaly amin'ny fiendrika mañano sy ny fiendrika anoina ny fiendrika añanovana ao amin'ny fiteny malagasy.
Ny fiendrika añanovana araka ny haiteny ankehitrinyHanova
Ny hoe fiendrika añanovana sy ny hoe fitodika mpamari-toe-javatra dia tsy manondro zavatra mitovy tanteraka. Mety ho endrika isehoan'ny fitodika toe-javatra na ny fitodika zoina ny fiendrika añanovana, arakaraka ny firehan'ny haiteny anaovana ny fanadihadiana.
Fiendrika añanovana araka ny haiteny ara-piofohanaHanova
Ho an'ny mpahay teny ara-piofohana dia mety hanana hevitra mifandray amin'ny fitodika toe-javatra na amin'ny fitodika zoina ny fiendrika añanovana.
1. Fitodika zoina
Fitodika zoina fitaovana: Ikapohan'ny ankizy ny omby ny kibay
Fitodika zoina alalana: Anenjehan'ny olona lambo ny alika.
Fitodika zoina tolorana: Ivarotan-janako ny fiara ilay mpanan-karena.
2. Fitodika toe-javatra
Fitodika toe-javatra toerana: Ananangonany ahitra ny any an-tsaha.
Fitodika toe-javatra araka ny haiteny araka anjara asaHanova
Ao amin'ny haiteny araka anjara asa kosa dia tsy misy ny fanavahana ny fiendrika amin'ny fitodika ka amin'ny ankapobeny ny fiendrika añanovana dia ny fitodika mpamari-toe-javatra ihany, noho ny haiteny araka anjara asa manankina ny fanadihadiany amin'ny endriky ny matoenteny sy ny tsirinteny ary ny isan'ny vaniny ao amin'ny fehezanteny kely indrindra.
Anenjehan'ny olona lambo ny alika.
Ijanonan'ny fiara ny eo amoron-dalana.
Ivarotan-janako ny fiara ilay mpanan-karena.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiendrika_añanovana&oldid=977095"
Dernière modification le 18 Novambra 2019, à 09:46
Voaova farany tamin'ny 18 Novambra 2019 amin'ny 09:46 ity pejy ity.